Madda Walaabuu Press: Qarri Qeerroo Oromoo Akka Hin Doomneef Dafnee Haa dirmannu!
Tarkaanfiileen fakkeenyaaf kaafaman kun osoo dhugumaan fudhatamaniiru tahee oduun isaa waan ‘Sagalee Qeerroo’ fi miidiyaa isatti dhihoo qofa biratti murtaahee hafuuf hin qabaatu ture. Fincilli Oromoo baatii shanan dabraniif geggeeffamaa ture akka itti gurraa ija miidiyaa maraa hawatee bal’inaan gabaafamaa ture ni yaadanna. Sababni isaas ragaa suuraa fi viidiyootiin kan deeggarame dhugaa qabatamaa waan tureef qofa. Miidiyaan ‘Sagalee Qeerroo’ jedhamu gaafa hundeeffame irraa qabee akkuma waan sochiin‪#‎OromoProtests‬ fakkaatu Oromiyaa keessatti waggaa hedduuf geggeeffamaa turetti nu gowwoomsuun beekama.
Walumaa galatti qarri qeerroo keenyaa akka hin doomne yeroo hundumaa kan tiksuu qabu ummata. Qaroon qeerroo Oromoo hanga jaamutti callisanii taa’anii laaluun of ganuu dha. Qeerroo dhugaan wareegama baasee akka baatii shanan dabaranii sanitti seenaa isaa dhiigaan galmeeffatutu Oromoo bilisa baasa. Kana irraa kan hafe tuullaa sobaan diina injifachuun hin danda’amu. Gurra guddisiidhaan of himanii ummata ofii gowwoomsuu fi afanfaajjessuunis amala qabsaawummaa hin garsiisu. Akka Oromootti wal jaalanna, waliif dhaadanna, waliin dhaabanna yoo taheef dhugaa jirtu qofa walitti himaa deemuu qabna malee sobaan wanni wal amasiifnu hin jirtu.
Dhuma irratti, dargaggoonni Oromoo muratoon kan hoggana diinni mataa keessan irratti jaaree hojjechiisaa ture jalatti hamileen keessan akka malee tuqamaa ture amma baga dhugaan keessan mul’ate. Didhaa sana hundaa jalatti diddanii cichitanii saba keessaniif hojjechaa yoona gahuu keessaniif ummanni Oromoo fi Oromiyaan isin galateeffatu, isiniin boonu, hegereef illee abdii isin irra kaayyatu. Kanuma waliin eega namni isin hogganaa keenya jettanii jalatti hiriirtanii deemaa turtan diina tahuun mirkanaahee, galmeen maqaa keessaniis harka diinaa jira jechuu dha. Kanaafuu of eeggannoo jabaa mataa keessaniif gochuu hin dagatinaa. Ilmaan Oromoo dhugaaf dhaabbattan hundi haqa qabdu. Haqa qabdaniin of irratti hirkattanii jaaramtanii qabsoofnaan injifannoon waan hin oolle. Kana gochuuf ammoo daandii qajeelaa fi kaayyoo Oromummaa xaliilawaa tahe irratti haarayatti jaaramuuf haa warraaqnu.